Dos na Emela nke Ahịa Marketing | Martech Zone
Monday, September 30, 2013 Tuesday, October 1, 2013 Douglas Karr
Ọ dị mma, lee anya gị n'ehihie. Iji Meltwater Buzz, anyị dị nnọọ hụrụ infographic a dị mfe ma mara mma na-enye ndepụta nyocha nke ihe ndị mmadụ nwere ike ịchọrọ iburu n'uche mgbe ha na-emepe usoro ịzụ ahịa ọdịnaya ha.
Otu n'ime iwu gbasara ịde blọgụ bụ Ebipula akwukwo ederede edeturu. Ahụla m ọtụtụ ederede dị njọ (wepụ isiokwu, na-ekwu uche dị ka eziokwu, enweghị isi) nke ka nwere ụtọasụsụ na nsụgharị nke ọma, yabụ ekwere m na ihe ha bu n'uche bụ emezighituri blog. A na edekarị ederede m nke ọma… mana echere m na ha ka nwere ọdịnaya bara uru maka ọtụtụ akụkụ… ndị grammarians na ndị omenaala? N'uche nke m, uru ọdịnaya gị na-ata ka edere ya ede. Nke ahụ bụ echiche m n'ihi na m na-ackụ ụtọ asụsụ na nsụpe, ọ bụ ezie.
Ọ bụrụ na m ga-eme ka nguzo gị na a ga-eji ọdịnaya gị dee ederede gị niile, enwere m ike ịnwe ezigbo nsogbu na akwụkwọ ozi a. A na-akpọ infographic ahụ Do na Dont's nke Ọdịnaya Ahịa. Ọbụna amaghị nke m jọgburu onwe ya nke asụsụ Bekee mere ka m mee okpukpu abụọ na aha. Kwesighi ya Dos na Ekweghi ka ahia ahia?
Ọkt 1, 2013 na 9:23 AM
Atụmatụ dị ịtụnanya Doug! Kpọgidere ya ọzọ .. M n'ezie nwere nnọọ ihe ọmụma na-agụ .. Daalụ maka nkekọrịta!
Ọkt 3, 2013 na 7:25 AM
Hey Douglas, daalụ maka ịkekọrịta. Ọ bụ ezigbo infographic, na ọtụtụ ndụmọdụ bara uru. Achọpụtaghị m na typo na aha, ruo mgbe m na-agụ gị ikwu na post 🙂 Ma ị bụ eziokwu, ọ kwesịrị “Dos”.